FIHAONAMBEN’NY IFI MADAGASIKARA Nanehoana fahavonona amin’ny fanohanana hatrany ny Filoha Rajoelina – Free News
lundi, 18 octobre 2021 - 9:11
Accueil/Politika/FIHAONAMBEN’NY IFI MADAGASIKARA Nanehoana fahavonona amin’ny fanohanana hatrany ny Filoha Rajoelina
FIHAONAMBEN’NY IFI MADAGASIKARA Nanehoana fahavonona amin’ny fanohanana hatrany ny Filoha Rajoelina
Nanatanteraka fihaonambe nasionaly nanamafisana ny fanohanany ny Filoha Rajoelina Andry eo amin’ny Politikam-pampandrosoana tanterahiny eto amin’ny firenena, ny Vovonana « Isika Fikambanana miara-dia amin’i Rajoelina Andry » (Ifi), ny faran’ny herinandro teo. Naseho tamin’izany indray ny foto-kevitra ijoroan’ny Ifi, ny amin’ireo lahasa maro entina hanohanany hatrany ny Filoha…
Stanislas R. il y a 1 semaine
Nilaza tsy hivadi-belirano amin’ny Filoha Rajoelina Andry, ny Fikambanana Ifi, manoloana ny ezaka fampandrosoana tanterahina ankehitriny
Tsy hivadi-belirano amin’ny fanohanana ny Filoha Rajoelina ! Io no nisongadina nandritra ny fotoana nanatanterahan’ny Vovonana « Isika Fikambanana miara-dia amin’i Rajoelina Andry » (Ifi) fihaonambe nasionaly teny Vontovorona, ny sabotsy lasa teo. Namafisina tamin’izany ny foto-kevitra ijoroan’ny vovonana nentina nanohanana ny Filoha hatramin’ny taona 2018, ary nanentanana ireo fikambanana maro mpanara-dia ny Filoha, manoloana ireo sakan-tsakana sy fanelingelenana, ary fanoherana fampandrosoana ataon’ny sasany ankehitriny amin’ny Fitondram-panjakana mijoro. Tamin’izany koa no nanamafisan’izy ireo ny « tena namana » izay voalaza fa tsy afa-misaraka amin’ny fanarahan-dia ny Filoha, manoloana ireo ezaka marolafy entina mampandroso haingana an’i Madagasikara. Namafisina nandritra izany koa ny hanohizana ny fandraisan’andraikitra eny anivon’ny fiarahamonina, izay tsy hianona fotsiny amin’ny fandresen-dahatra, fa hanao izay hahatsapan’ny vahoaka ny fampandrosoana imatimatesana ankehitriny, amin’ny alalan’ny fifanomezan-tanana. Nambaran’ny Filoha nasionalin’ny Ifi, Senatora Ramanambitana Richard, fa « tsy manam-pahavalo afa-tsy ny fahantrana sy tsy fandrosoana, ny Ifi, ary ny fifankatiavana dia midika ho fitiavan-tanindrazana. Noho izany, tsy mbola nivadi-belirano ary tsy hivadi-belirano amin’ny Filoha na oviana ny Ifi, na inon-kidona sy hihatra ». Namafisiny, fa miara-dia sy miray saina hatrany amin’ny Filoha Rajoelina Andry, ny Vovonana Ifi. Tanjona, hoy izy, ny haha lohalaharana an’i Madagasikara aty Afrika sy ny Ranomasimbe Indiana. Na dia faralahin’ireo fikambanana manohana ny Filoha, aza, ny Ifi, dia voalohany indrindra amin’ny fananana tanjaka manerana ny Nosy, amin’ny fanohanana ny Filoha amin’ny alalan’ireo ezaka ataony, raha ny nomarihan’ny Solombavambahoaka voafidy tao amin’ny distrikan’Atsimondrano, Ratsivahiny Andry, izay tonga nanotrona io fihaonambe io.
Hery lehibe ny fananana fikambanana matanjaka hanohana ny Filoha
Mielim-patrana manerana an’i Madagasikara, ankehitriny, ny Ifi
Nambaran’ny Solombavambahoaka Ratsivahiny Andry, fa matanjaka sy mavitrika ny Vovonana Ifi eran’i Madagasikara, izay tarihan’ny Filoha nasionaliny. Notsiahiviny koa, fa maro no mitady ny toerana misy ireo mpitondra sy tompon’andraikitra manohana ny Filoha, ankehitriny. Hery lehibe ho an’ireo « Mpiara-dia amin’ny Andry Rajoelina », anefa, ny fananana antoko sy fikambanana manohana ny Filoha, manoloana ny fampandrosoana entiny, satria tsy vitan’antoko samirery izany, raha ny nomarihan’ny Depiote. Niantso ireo olom-boatendry sy olom-boafidy rehetra, ny tenany, mba hanao toy ny ataon’ny Ifi, ka hanome fanampiana sy hiantso fiaraha-miasa amin’ny mpiara-monina isaky ny fokontany. Nambarany koa fa maro no manenjika ny Filoha, satria manatona ny fotoam-pifidianana. « Tsy hitan’izy ireo intsony izay hatao dia ny fanaratsiana no ventesina hatrany. Amin’ny maha solombavambahoaka ahy eto amin’ity distrika ity, dia sahiko ny milaza fa ny zava-bitan’ny Filoha nandritra ny roa taona sy valo volana dia tsy vitan’ireo mpitondra nifandimby teo aloha nandritra ny taona marobe ». Niantso fitambarana amin’ny fandrotsahana ny Filoha Rajoelina Andry amin’ny fifidianana manaraka amin’ny 2023, ny Depiote Ratsivahiny Andry, raha nambarany fa « mahasaropiaro loatra ny vokatry ny fampandrosoana tanterahin’ny Filoha ankehitriny, ary tsy vitan’ny dimy taona fotsiny izany ».
900 000 ireo mpikamban’ny Ifi manerana ny Nosy
Mahatratra 900 000 ankehitriny ireo mpikambana Ifi manerana an’i Madagasikara, izay mivondrona anaty fikambanana miisa 400 ivelan’ny TGV sy MAPAR. Samy resy lahatra amin’ny fitondran’ny Filoha Rajoelina, ary nilaza ny hanohana azy hatramin’ny farany, izy ireo. Hita teny Vontovorona avokoa ny solon-tena avy amin’izy ireo, ka anisan’izany ny fikambanana « Nouvelle Génération de la Patriote », izay avy amin’ny fikambanana Silamo manohana ny Filoha.
TETI-DRATSY APOLLO 21: Olona 21 nohenoina, Jeneraly am-perinasa ny dimy
FANOHANANA ARA-TSOSIALY : Mpiasa 1500 nisitraka ny “Tsinjo Fameno”